Xasan oo ka hadlay dilka Suxufiyiinta
10 Nov 10, 2012 - 5:57:23 AM
Madaxweynaha Somali Xasan Sh. Maxamuud ayaa sheegay in la sameynayo Gudi baaris ku sameeya dilalka loo geysto Suxufiyiinta Somalia, kadib kulan uu Villa Somalia kula yeeshay qaar ka mid ah qaybaha kala duwna ee Suxufiyiinta ka howgala Muqdisho.
Xasan Shiikh wuxuu sheegay in DF aysan u dulqaadan doonin dilalka macnodarada ah ee loo geysanayo Suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta guud ee dalka ka jirta, gaar ahaan kuwa ku sugan Muqdisho.
"Uma dulqaadan doono in la dilo wariye kale, waxaan ka codsanaynaa shacabka inay gacan ka geystaan sidii loo qaban lahaa dambiilayaasha ka dambeeyay dilalka loo geysto suxufiyiinta" ayuu yiri Xasan Shiikh oo la hadlayay koox wariyeyaal ah.
Suxufiyiinta uu la kulmay Madaxweynaha ayaa waxaa ku jiray kuwo saacado badan ku xayirnaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo, kuwaasoo maamulka halkaa ka jira uu u diiday inay gudaha u galaan Magaaladaas oo ay howlo shaqo ugu socdeen.
Wariyeyaasha Sanadkan lagu dilay gudaha Soomaaliya ayaa waxay tiradoodu maraysaa 18, kuwaasoo intooda badan lagu dilay Magaalada Muqdisho, waxaana kula jira sadex wariye oo ka howlgalayay Idaacada Shabelle oo ka
mid ah kuwa ka howgala Muqdisho.
Ma jirto cid loosoo qabtay dilalka Suxufiyiinta loo geysto, waxaana dilalka 10 ka mid ah wariyeyaashii sanadkan la dilay mas'uuliyada sheegtay Al-shabaab oo DF kula jirta dagaal, waxaana wariyeyaashii la kulmay Xasan Shiikh qaarkood ay rajo xumo ka muujiyeen hadalkiisa.
Madaxweynah Somalia ma uusan sheegin xiliga uu gudiga dabagalka ku sameynaya dilalka wariyeyaasha magacaabi doono; iyadoo inta badan madaxda Soomaalidu ay sheegaan inay wax qabanayaan marka la dilo wariye.